ဘာသာရေးအမည်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ | လရောင်လမ်း
Posted by တေဇာ (လရောင်လမ်း) On Sep 4, 20103comments
10 Extreme Weird Religions ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော တစ်ဖက်စွန်းကျအောင် ဆန်းပြားသည့် ဘာသာရေး (၁၀) ခု စာရင်းတွင် Celebrity အချို့ စွဲလန်းရူးသွပ်နေကြသည့် Scientology က ထိပ်ဆုံးနေရာမှ ပါဝင်သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် Scientology Church အား ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း ဖတ်ခဲ့ရဖူးသည်။ အထူးသဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများအား ပစ်မှတ်ထား စည်းရုံးလေ့ရှိသည့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အန္တရာယ်ဖြစ်မည် စိုးသည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ သွန်သင်ချက်များအား အဖွဲ့ဝင်အသစ်များကို အစပိုင်းတွင် သင်ကြားပေးခြင်းမရှိဟု ဆို၏။ သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့်တစ်ခုရောက်မှသာ၊ တစ်နည်း ရင့်ကျက်လာမှသာ သင်ကြားပေးလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက် ပို့ချချက်များတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း သန်း (၇၀) ခန့်က လူသား သန်းထောင်ပေါင်းများစွာအား ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည် ဟူသည့် `ဇီနူး´ (Xenu) အမည်ရှိ ဂြိုဟ်သားတစ်ဦး၏ ဇာတ်လမ်းလည်း ပါဝင်သည်။ မီးတောင်များအတွင်းသို့ သူက ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံးများ ဖောက်ခွဲခဲ့သည် ဟူ၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ (ကျွန်တော်သိသလောက်) နိုင်ငံအများစုတွင် Scientology အား တရားဝင် `ဘာသာတရား´ (Religion) တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိပါ။ ထိုစာရင်းပါ အခြားသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု အဆန်းအပြားများသည်လည်း (ကမ္ဘာ့လူဦးရေနှင့် ချိန်ထိုးသော်) လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတစ်စုလောက်သာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသော `အသင်းအဖွဲ့´ များသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် `ဘာသာတရား´ (Religion) ဟူသော ဝေါဟာရ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား နားလည်ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ Religion ဟူသော အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ၏ အနက်မှာ `၁) ဘုရား၊ သို့မဟုတ် ဘုရားများတွင် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အဆိုပါ ယုံကြည်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ၊ ၂) ဘုရား၊ သို့မဟုတ် ဘုရားများနှင့် ဆက်ဆိုင်သော ယုံကြည်မှု စနစ်တစ်ရပ်´ ဟု Collins Cobuild Learner’s Dictionary မှ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ ဤအနက်ဖွင့်နှင့် ချိန်ထိုးသော် Scientology အပါအ၀င်၊ ဆန်းပြားသည့် ယုံကြည်မှုများကိုင်စွဲထားသည့် အသင်းအဖွဲ့များသည် `ဘာသာရေး´ ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရောက်နေရန် မသင့်တော့ပေ။ ၎င်းတို့တွင် ထင်ရှားသည့် `ဘုရား´ (God) သဘောတရားတစ်ရပ် တည်ရှိမနေဘဲ အများစုမှာ `လုံးဝ´ ကင်းမဲ့နေသည်။ ထိုထက်ပို၍ ဆိုရလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသော်မှ အဆိုပါအနက်ဖွင့်အရ Religion စာရင်းထဲ ရောထွေးနားလည်လိုက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ God ဟူသော အသုံးအနှုန်းမှာ ဖန်ဆင်းရှင်၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာကြီးအား ကြီးစိုးချယ်လှယ်နေသည့် သဘာဝလွန်အင်အားစုတစ်ခုခုကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ နားလည်ထားသည့် `ဘုရားရှင်´ နှင့် သဘာဝချင်း အလွန်ခြားနားသည်။ ဤနေရာတွင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအား အဆိုပါ လက်တစ်ဆုပ်စာ အယူသီးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် တစ်တန်းတည်း သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း အထူးသတိပြုစေလိုပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် ရောထွေးနားလည်မှုများအား ရှင်းလင်းစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်သာရှိပါသည်။
အဆိုပါ အသင်းအဖွဲ့များစာရင်းတွင် Creativity Movement ခေါ် လူဖြူကြီးစိုးရေး အစွန်းရောက် အဖွဲ့တစ်ခု ပါဝင်သည်။ မျက်လှည့်ဆရာ၊ မှော်ဆရာများ ကြီးစိုးသည့် TOPY အမည်ရ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။ စာရေးဆရာ Robert A. Heinlein ရေးသားသည့် Stranger inastrange land အမည်ရှိ သိပ္ပံဝတ္ထုတွင် ပါဝင်သည့် စိတ်ကူးယဉ် ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သော `ကမ္ဘာပေါင်းစုံ ဘုရားကျောင်း´ (Church of all worlds) ဟူသည့် အဖွဲ့တစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဝတ္ထုနှင့် ၀တ္ထုပါ ဘာသာတရားတစ်ခုအား စွဲလန်းနှစ်သက်သည့် စာဖတ်သူ၊ မိတ်ဆွေတစ်စုမှ ဆင်းသက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ တစ်ဖန် `စကြ၀ဠာ လူသားများ´ (Universe People) ဟူသည့် ကမ္ဘာခြားမှ သက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို အခြေပြုသော ယုံကြည်မှုတစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုဘာသာရေးအစွဲအလန်း အများစုသည် ဆန်းပြားသည်မှန်သော်လည်း ပုံပြင်ဆန်လွန်းလှပြီး နောက်ခံအတွေးအခေါ်အယူအဆ ခေါင်းပါးကာ လေးနက်မှုမရှိဟု ယူဆသဖြင့် အသေးစိတ်များအား ချန်လှပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုထဲတွင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားမိသည့် (၎င်းတို့အခေါ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ) အယူအဆတစ်ရပ်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းမှာ The Church of Euthanasia ခေါ် မိမိကိုယ်ကိုယ် နာကျင်မှုမရှိအောင် အဆုံးစီရင်ခြင်း အယူအဆ ဖြစ်ပါသည်။
Euthanasia ၏ ပုံစံကျ အနက်မှာ ကုမရသည့်ရောဂါ၊ သို့မဟုတ် အသက်ရှင်ရန် မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ဘဲ ဝေဒနာအပြင်းအထန် ခံစားနေရသူများအား အနာအကျင်မရှိစေဘဲ အဆုံးစီရင်ပေးခြင်းမျိုးကို ခေါ်သည်။ မြန်မာအခေါ် `၀ဋ်ချွတ်´ ပေးလိုက်သည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းအား ဆွစ်ဇာလန် [*] နိုင်ငံရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ဥပဒေအရ တရားဝင်လုပ်ဆောင် နိုင်သည်ဟု မှတ်သားရဖူးသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင်မူ မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်သေခြင်း (Suicide) ကဲ့သို့ပင် Euthanasia အား ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သော်မှ ဆရာဝန်များက လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကို ဥပဒအရ ခွင့်မပြုပါ။ အဆိုပါ မိမိ၏ `သေခွင့်´ အား မိမိဘာသာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်၊ သို့မဟုတ် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် စီရင်ပိုင်ခွင့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အကျယ်တ၀င့် ငြင်းခုန်ကောင်းနေကြဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
The Church of Euthanasia (CoE) အယူအဆအား ပြန်ဆက်ရလျှင် ၎င်းမှာ ငြင်းခုန်စရာကောင်းသည့် Euthanasia သဘောတရား သက်သက်မျှ မဟုတ်ပေ။ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအမြင် စသည့် သဘောတရားများချည်းသက်သက် မဟုတ်ပေ။ နောက်ကွယ်တွင် အယူအဆ [အတွေးအခေါ်] တစ်ခုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ သာမန် Euthanasia တွင်ကဲ့သို့ ဝေဒနာခံစားနေရခြင်းကြောင့် အဆုံးစီရင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ လူသားနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားသော သက်ရှိမျိုးစိတ်များအကြား ချိန်ခွင်လျှာအား ထိန်းညှိရန် ရည်စူးသည်ဟု ဆို၏။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ အဆမတန်တိုးပွားလာခြင်း၊ သဘာဝနှင့် အခြားသက်ရှိများအပေါ် လူသားတို့၏ ကြီးစိုးခြိမ်းခြောက်လာမှု စသည့်အချက်များသည် အထင်အရှားဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လူသားများမင်းမူနေသည့် ကမ္ဘာကြီးအား ပြန်လည် ချိန်ညှိရန်ဟူသည့် အယူအဆမှာ မှားခြင်းမှန်ခြင်းကို အသာထား၊ လှပသော အတွေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ထင်မြင်မိပါသည်။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်မိစားသည်မှာ ဤအယူအဆ/အတွေးအခေါ် အထိသာ ဖြစ်ပါသည်။ CoE ၏ စရိုက်မှန်အား ဆက်လက်လေ့လာလျှင်မူ အရုပ်ဆိုးမှုများကို မြင်တွေ့ရပေမည်။
CoE အနေဖြင့် ၀တ်ရွတ်ခြင်း၊ သီဆိုတီးမှုတ်ခြင်း၊ စုဝေး၀ိုင်းဖွဲ့ခြင်း၊ လူထုကြားသရုပ်ပြခြင်းများနှင့် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ တိုးပွားလာသော ကမ္ဘာ့လူဦးရေကို ထင်ရှားစေရန် သရော်ခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းများအား တိုက်ရိုက်ကျကျ ပြုလုပ်သည်။ တက်ကြွသော ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်များနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်မှုကြောင့်လည်း CoE သည် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းတို့၏ သြ၀ါဒတစ်ရပ်မှာ `သင် မျိုးမပွားသင့်´ (Thou shalt not procreate) ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ CoE ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အခြားသော မူဝါဒ လေးရပ်မှာ (ကျွန်တော့်အနေဖြင့်) အလွန်ပြုံးချင်စရာ ကောင်းသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေခြင်း (Suicide)၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း (Abortion)၊ လူသားစားခြင်း (Cannibalism) တို့နှင့် Sodomy ခေါ် မျိုးပွားရန်မရည်ရွယ်သည့် မည်သည့် လိင်ဆက်ဆံနည်းမျိုးမဆို [မြန်မာလူငယ်အခေါ် `ဘီဆိုက်´] ဟူသော အချက်လေးရပ်ကို စံအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ `ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေပါ´ (Save the Planet. Kill Yourself) မှာ ၎င်းတို့၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်၏။ အဆိုပါ မူဝါဒများကြောင့် လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း ဆန့်ကျင်ရေးသမားများအနေဖြင့် အနာပေါ်တုတ်ကျသလို ဆတ်ဆတ်ခါ နာကျည်းကြရသည်မှာ မဆန်းလှပါ။ လူသားစားခြင်းကိုမူ သေပြီးသားလူကိုသာ စားသုံးရန် [သတ်မစားရန်] တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားသည် ဆို၏။ [အဖွဲ့လိုက်စုရုံး၍ လူသားစားနေသည့် ဓာတ်ပုံအထောက်အထား အတော်များများ တွေ့ခဲ့ရဖူးသည်]
တကယ်တော့ CoE ၏ မူဝါဒများမှာ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်လှပြီး ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများ၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အလွန် အော့နှလုံးနာစရာ ကောင်းလှသည်။ ထို့အပြင် အခြားသော ဘာသာရေး၊ လူသားချင်းစာနာမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အသင်းအဖွဲ့လှုပ်ရှားမှု အတော်များများနှင့်လည်း အများနှင့်တစ်ယောက်ဆိုသလို ထိပ်တိုက်ချည်း ဖြစ်နေသည်။ စင်စစ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေတိုးပွားလာမှုသည် အချိန်ယူဖြေရှင်းရမည့်၊ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းရှာရမည့် ပြဿနာတစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ CoE ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် မူဝါဒများအားဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်နိုင်သည်မှာ ထင်ရှားသည်။ ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများမှာ အရွဲ့တိုက်ခြင်းသဘောသာ ဆန်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာထက်၊ အသင်းဝင်များအနေဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအကျိုးအတွက်ဟူ၍ ဗန်းပြခုတုံးလုပ်ကာ အရိုင်းစိတ်အား ဖော်ပြခြင်းသက်သက်ဟု ထင်မြင်မိသည်။ သို့မဟုတ် အများထက်ထူးခြားလိုသော၊ အများအား အံ့အားသင့်စေလိုသော ကလေးစိတ်တစ်မျိုးတွင် အခြေခံထားခြင်းသာ ဖြစ်ပေမည်။ Kill Yourself ဟု အသံကုန် အော်နေမည့်အစား အမှန်တကယ် ယုံကြည်သည်ဆိုလျှင် ထိုသူသည် မိမိကိုယ်တိုင် အရင် သတ်သေပြသင့်သည်မဟုတ်လော။ ထို့နောက် မိမိအလောင်းအား အခြားအဖွဲ့ဝင်များ စားသောက်နိုင်ရန် လှူဒါန်းခဲ့သင့်သည် မဟုတ်လော။ CoE အဖွဲ့ဝင် ဘယ်နှစ်ယောက်ခန့် မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေပြီးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာ မတွေ့ရှိရပါ။ အချုပ်ဆိုရသော် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် လိင်တူဆက်ဆံသူများ၊ အကြမ်းဖက်စိတ် အခြေခံရှိသူများ၊ ကလေးစိတ်နှင့်လူကြီးကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ (Retard) သည်းခြေကြိုက်ကြမည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်မျှ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
စက်တင်ဘာ (၄) ၂၀၁၀
Ref: 10 Extreme Weird Religions
In Switzerland, deadly drugs may be prescribed toaSwiss person or toaforeigner, where the recipient takes an active role in the drug administration. More generally, article 115 of the Swiss penal code, which came into effect in 1942 (having been written in 1918), considers assisting suicideacrime if and only if the motive is selfish. (Source: Wikipedia)
ဒီလို စာမျိုးဖတ်ခွင့် ရတာ ကျေးဇူးပါ။ အဲလို လူတွေလဲ ရှိသေးသကိုး
၎င်းမှာ The Church of Euthanasia ခေါ် မိမိကိုယ်ကိုယ် နာကျင်မှုမရှိအောင် အဆုံးစီရင်ခြင်း အယူအဆ ဖြစ်ပါသည်။
Euthanasia ၏ ပုံစံကျ အနက်မှာ ကုမရသည့်ရောဂါ၊ သို့မဟုတ် အသက်ရှင်ရန် မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ဘဲ ဝေဒနာအပြင်းအထန် ခံစားနေရသူများအား အနာအကျင်မရှိစေဘဲ အဆုံးစီရင်ပေးခြင်းမျိုးကို ခေါ်သည်။
I like that -ism.
When I got pain on my knee, I strongly want to die. If I'veapistol I'll surely kill myself.
A person who knowsalot of thing and followed the society law not necessary to enter any religion. That is my own policy.
If he become useless better to die.
I had talked my wife, sons, daughters and grandchildren, that when I'm going to hell don't save me...Let me go freely without any serious pain. I forgot the word PLUG THE HOLE or PULL THE PLUG..
You can read Sidney Sheldon's Nothing Lasts Forever.
Your policy is perfect, in my point of view.
Thank for expression your opinion in such an explicit way and the book you mentioned. I will search it.